Somali News 06.11.21 | KWIT
Midowgii ku hanjabay inuu shaqo joojin ku sameynayo warshad soo saarta hilibka doofaarka Smithfield ee ku taal Sioux Falls ayaa sheegay inay heshiis hordhac ah la gaareen shirkadda oo ku saabsan heshiis afar sano ah. Xubnaha Ururka waxay diideen soo jeedin qandaraas hore waxayna ogolaadeen shaqo joojin. Hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa sheegaya in xubnahooda ay u codeyn doonaan qandaraaska la soo bandhigay isbuuca soo socda. Warshaddu waxay ahayd goobtii dhimashada ba'an ee COVID-19.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay ku dartay 11 dhimasho dheeraad ah COVID-19 sabab la xiriirta wadar ahaan 6,095 tan iyo bilowgii cudurka faafa.
Waxaa jira 73 bukaan oo jiifa isbitaalka oo qaba fayraska gobolka. Lambarada maxalliga ah lagu sii deyn maayo Siouxland Caafimaadka Degmada sababo la xiriira hoos u dhac dhowaan ku yimid kiisaska.
Madaxweyne ku xigeenkii hore Mike Pence ayaa lagu wadaa inuu booqdo Iowa bisha soo socota. Pence wuxuu cinwaan uga dhigi doonaa dalxiis loogu talagalay Wakiilka Mareykanka Randy Feenstra bisha Luulyo 16 ee Xarunta Sioux.
Somali News 06.10.21
By Person: Hilma Osman • Jun 11, 2021
Hay'adaha fulinta sharciga ee maxalliga ah waxay la shaqeynayaan Xafiiska Badbaadada Badbaadada Wadooyinka ee Guddoomiyaha Gobolka si looga caawiyo yareynta qulqulka dhimashada ee wadada Iowa.
Waaxda Gaadiidka ee Iowa ayaa soo warisay koror 25-boqolkiiba dhimashada sanadkan marka loo eego sanadkii hore.
Ilaalada gobolka Iowa State ayaa u sheegay Des Moines Register inay arkayaan qaar ka mid ah darawalkii ugu halista badnaa ee ururada 85 sano iyadoo ay dadku aad u wadaan xawaare ayna isticmaalayaan telefoonadooda.